Fiber Optical Zvigadzirwa Vagadziri | China Fiber Optical Fekitori & Vatengesi
CWDM Optical Simba Meter
Iyo CWDM Optical Power Meter chishandiso chine simba kwazvo pazvishandiso zvinonyanya kudiwa senge yakakwira-mhanyisa CWDM network zvinodiwa.Iine anopfuura makumi mana akaenzana wavelengths, kusanganisira ese maCWDM wavelengths, iyo inobvumidza kune mushandisi-akatsanangurwa kuyerwa wavelengths, uchishandisa nzira yekududzira pakati peyakaenzana pfungwa. Shandisa iyo Bata Min / Max Simba basa kuyera system simba kuputika kana kuchinja.
Inotakurika yemagetsi emagetsi mita ndeyechokwadi uye inogara yakasimba mita yemawoko yakagadzirirwa kuisirwa, kushanda uye kugadzirisa kweiyo fiber fiber network. Icho chigadzirwa chakabatana chine backlight switch uye auto simba on-off kugona. Kunze kwezvo, inopa yekuyera-yakafara kuyera renji, kukwirira kwakaringana, mushandisi wega-calibration basa uye chiteshi cheyese. Uye zvakare, inoratidza mitsara mitsara (mW) uye zvisina-mitsara zviratidzo (dBm) mune imwe skrini panguva imwe chete.
PON Optical Simba
Yakakwira Precision Simba Meter Tester, JW3213 PON Optical Power Meter inokwanisa kuyedza panguva imwe chete uye kufungidzira iwo masaini ezwi, data uye vhidhiyo.
Icho chinhu chakakosha uye chakanakira chishandiso chekuvaka nekuchengetedza mapurojekiti ePON.
ABS Bhokisi PLC mahwanda
Yedu Imwe-mode Planar Lightwave Circuit Splitter (PLCS) inogadzirwa zvichibva pane yakasarudzika silica girazi waveguide maitiro ine yakavimbika chaiyo yakaenderana fiber pigtail mune minia-ture package, inopa yakaderera mutengo mwenje yekuparadzira mhinduro ine diki fomu chinhu uye yakanyanya kuvimbika. Iwo maPLCS zvishandiso zvine hunyanzvi hwekuita maererano neyakaderera yekuisa kurasikirwa, Yakaderera PDL, yakakwira kudzoka kurasikirwa uye yakanakisa kufanana pamusoro pehupamhi wave-kureba renji kubva 1260nm kusvika 1620nm uye kushanda mukutonhora kubva -40 kusvika +85. Iwo ma PLCS zvishandiso zvine mamiriro akajairwa e1 * 4, 1 * 8, 1 * 16, 1 * 32, 1 * 64, 2 * 2, 2 * 4, 2 * 8, 2 * 16 uye 2 * 32.
Mini PLC mahwanda
Compact & Kurema uremu
Inoshandiswa kune Fibers, Tambo uye SOC (splice- pane chinobatanidza)
Yakabatanidzwa Holder Dhizaini
Yakazara otomatiki, Semi-otomatiki uye Mashandiro Ekushandisa
Shockproof, Kudonha kuramba
Simba rekuchengetedza Basa
4.3 padiki Ruvara LCD tarisisa
Signal Moto AI-7C / 7V / 8C / 9 shandisa yazvino musimboti yekumisikidza tekinoroji ine auto tarisa uye matanhatu mota, icho chitsva chizvarwa che fiber fusion splicer. Inonyatsogoneswa ne100 km trunk kuvaka, FTTH chirongwa, chengetedzo yekutarisa uye zvimwe fiber tambo yekutsikisa mapurojekiti. Muchina unoshandisa maindasitiri quad-musimboti CPU, mhinduro nekukurumidza, parizvino ndeimwe yeanokurumidza fiber splicing muchina mumusika; ine 5-inch 800X480 yakakwira-resolution resolution, iko kuvhura kuri nyore uye intuitively; uye kusvika kukana mazana matatu anotarisa kukudzwa, zvichiita kuti zvive nyore kwazvo kuona iyo fiber nemaziso asina kupfeka. 6 masekondi anomhanya epakati kurongedza kurongedza, masekondi gumi nemashanu kupisa, iko kushanda kwekushanda kwakawedzera ne50% zvichienzaniswa neyakajairika splicing michina.
FTTH Cable Kunze
FTTH yekunze donhwe tambo (GJYXFCH / GJYXCH) inonziwo inozvitsigira-shavishavi inodonhedza waya waya ine yemukati butterfly tambo uye yekuwedzera simba nhengo 1-12 fiber cores. shavishavi inodonhedza tambo yemagetsi ine tambo yemukati yefurufuru uye imwe nhengo yesimba mumativi maviri. Iyo fiber kuverenga inogona kuve 1-12 fiber cores.
FTTH Cable Yemukati
FTTH inodonhedza tambo ine nyore kuwana kune iyo fiber uye yakapusa kuisirwa, FTTH tambo inogona kuve yakabatana yakanangana nedzimba.
Inokodzera kubatanidza nemidziyo yekutaurirana, uye inoshandiswa sekuwana tambo yekuvaka munzvimbo yekuparadzira sisitimu. Iyo tambo yemagetsi yakaiswa pakati uye maviri akafanana Fibre Reinforce Plastic (FRP) nhengo dzesimba dzinoiswa kumativi maviri. Pakupedzisira, tambo inopedzwa neLSZ sheath.
Isu tinopa ese ese fiber optic chigamba tambo yekubatanidza ne EPON / GPON ONUs.
Patch tambo ndeye fiber optic tambo inoshandiswa kubatanidza imwe mudziyo kune imwe kuitira chiratidzo chenguva.
SC inomirira Subscriber Connector- chinangwa chaicho Push / dhonza dhizaini yekubatanidza. Iyo mativi, snap-in yekubatanidza latches ine yakapusa yekusunda-dhiza yekufamba uye yakakiyiwa.
External Modulation Transmitter, Xfp Transceiver, Optical Fiber Module, Huawei Qsfp +, Huawei Olt Mutengo, Sfp C ++,